West Slope Fellow - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Maxaa kucusub CIRC > West Slope Fellow
Gobolka Galbeedka Jiirada
Isku-duwaha Gobolka Galbeedka Slope
Location: Jiirada Galbeedka ee Colorado oo diiradda saareysa Telluride, Durango, iyo gobolka afar geesoodka ee ballaaran. Waxa laga yaabaa in la waydiiyo in laga shaqeeyo qaar ka mid ah Ridgeway, Gunnison, Montrose, iyo marmar ilaa Waqooyiga ilaa Grand Junction, gaar ahaan dhacdooyinka gobolka.
Doorbid adag oo loogu talagalay qof ku yaal mid ka mid ah gobollada soo socda: La Plata, San Miguel, Dolores, Montezuma, Archuleta.
Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageeridda xubnaha CIRC iyo bulshooyinka soo-galootiga deegaanka ee Galbeedka Jiirada Colorado. Ka hawlgeli xubnaha CIRC ee gobolka iyo bulsho weynta si ay u abaabulaan ololaha istiraatijiyadeed ee CIRC iyo hawlaha dhisitaanka.
Warbixinnada ku saabsan: Abaabulaha Gobol ee Galbeedka
CIRC West Slope Fellow ayaa mas'uul ka ah la shaqaynta Qabanqaabiyaha Gobolka West Slope si ay u taageerto xubnaha CIRC ee qaybaha miyiga ee Western CO dhismaha bulshada deegaanka, bixinta tababarada xubnaha, iyo hirgelinta ololayaasha mudnaanta istaraatiijiga ah ee CIRC.
Bixi tababaro sida ay khuseyso, sida Ogow tababarada Xuquuqdaada
Xoojinta horumarka xirfadeed ee saaxiibkiisa gaarka ah iyo falanqaynta siyaasadeed iyada oo loo marayo ka qaybgalka CIRC 2021 Program Fellowship.
Caawinta COVID ee bulshooyinka soogalootiga ah ee Western CO
Kordhi wacyigelinta bulshada, xooji isku xidhka jira, oo ku beer xidhiidho cusub bulshooyinka haajiriinta ah, gaar ahaan bulshooyinka miyiga ah, ee Western Colorado. Tan waxaa ku jira 1:1s joogto ah oo leh xiriiryo cusub iyo kuwa jira iyo sidoo kale ka qeybgalka iyo ka qeybgalka dhacdooyinka maxalliga ah.
Xoojinta xidhiidhada shaqo ee mudada fog iyo isku xidhka ururada soogalootiga ku salaysan iyo kuwa soo koraya ee ka jira gobolka Galbeedka lana qorto ururo cusub si ay xubno uga noqdaan CIRC
Taageer Qabanqaabiyaha Gobolka Galbeedka Slope si uu u abaabulo oo uu u martigeliyo shirarka gobolka ee saddexdii biloodba mar.
Shaqada isku xirka ururada maxaliga ah, iyo CIRC West Slope Organizer (marka ay khuseyso).
Gobolka ku xidh oo la socodsii inta Qabanqaabiyaha Gobolka ee Galbeedka Slope uu fasax ku maqan yahay.
Murashaxu waa inuu ku noolaado La Plata, San Miguel, Montezuma, Dolores, ama gobollada Archuleta ee Colorado.
COVID-19 iyo shaqada fog: Dadaal lagu doonayo in lagu ilaaliyo nabadgelyada iyo caafimaadka kooxdayada iyo jaaliyadeena inta lagu guda jiro dhibaatada caafimaadka bulshada ee socota, dhammaan shaqaalaha CIRC, oo ay ku jiraan kuwa la shaqeeya, waxay sii wadi doonaan inay ka shaqeeyaan guriga ilaa ogeysiis dambe.
Taariikhda bilawga Luulyo 5-deeda, 2022 illaa Sebtembar, 2023.
Si aad u dalbato, fadlan emayl u dir jobs@coloradoimmigrant.org resume-kaaga iyo jawaabahaaga ku saabsan su'aalaha ku lifaaqan marka la gaaro Juun 9, 2022.
"Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waa ka go'an tahay ka mid noqoshada buuxda ee dhammaan shakhsiyaadka u qalma. Iyada oo qayb ka ah ballan-qaadkan, waxaan xaqiijin doonnaa taas pDadka naafada ah waxaa la siiyaa hoy macquul ah. Hadday macquul tahay hoy ayaa loo baahan yahay si looga qayb qaato codsiga shaqada ama habka waraysiga, pheshiis ijaar la xidhiidh paola@coloradoimmigrant.org. CIRC waa la siman yahay Loo shaqeeyaha fursada oo aan takoorin ku salaysan isir, jinsi, diin, asalka qarameed, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, nooca galmada, naafanimada, da'da, ama mid kasta qayb kale oo ay ilaaliyaan sharciyada deegaanka, gobolka, ama federaalka. Waxaa naga go'an inaan dhisno a kala duwan, sinnaan, iyo kooxda shaqaalaha loo dhan yahay. Waxaan si adag u dhiirigelinaynaa codsadayaasha ah pdadka midabka leh, LGBTQ, haweenka, trans iyo jinsiga aan waafaqsanayn jinsiga, dadka qaba naafada; iyo/ama dad hore u xidhnaa."